Vaovao - Charging Alliance: 4173 vaovao ny pilotra ampaham-bolam-panjakana nampiana tamin'ny Mey, tafakatra 59,5% isan-taona
Tamin'ny 11 Jona, ny angon-drakitra navoakan'ny China Charging Union dia naneho tamin'ny fomba ofisialy fa hatramin'ny Mey 2018, ireo vondrona mpikambana ao amin'ny fiaraha-miasa dia nitatitra 266 231 ny antontan-taratasim-bahoaka, ary tamin'ny alàlan'ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-miasa dia nampiana santionany tamin'ny 441.422 ireo antontam-piara. angon-drakitra momba ny angona. Manodidina ny 708.000 ny pilotra famandrihana no nampiasaina.
Mikasika ny antontan-taratasim-bola ampahibemaso dia misy 116761 AC miompana fantsona, 84174 DC miavosa antontam-bato, ary 65296 AC sy DC mifampidinika fantsona. Tamin'ny Mey 2018, 4 173 ny pilotra famandrihana karazana ampaham-bahoaka no nampiana noho ny tamin'ny volana aprily 2018. Nanomboka tamin'ny Mey 2017 ka hatramin'ny aprily 2018, manodidina ny 8.273 ny pilotra famandrihana karazana ampaham-bahoaka no nampiana isam-bolana, ary tamin'ny Mey 2018, 59,5% ny tahan'ny fitomboana.
Nahatratra 16 ny isan'ireo mpandraharaha vaventy eto amin'ny firenena (ny isan'ny fitaovam-piantsenana> = 1000), ary ny tombony manokana no voalohany. 110 857 no nametraka paompy nanara-dia, narahin'ny State Grid ary 56,549 mpiavosa.
Ny fantsom-bolam-bolam-panjakana 10 voalohany amin'ny faritany administratif dia: 40 663 any Beijing, 34.313 any Shanghai, 32701 any Guangdong, 27.586 any Jiangsu, 20.316 any Shandong, 12 759 any Zhejiang, 11.555 any Tianjin, ary 11,232 any Hebei. , 10.757 ao Anhui ary 7.527 ao Hubei.
Ny isan'ny trano iasan'ny daholobe sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana, ny distrika ary ny tanàna dia nitombo hatrany, ary ny habetsaky ny herinaratra nampandoavina dia nitombo somary nitovy tamin'ny volana lasa
Ny fahefam-pirenena dia mifantoka indrindra amin'ny Delta Renirano, ny Delta renirano Yangtze ary ny faritra afovoany sy andrefana. Fiaran'ny mpandeha tsy miankina no tena manjaka ao Beijing; ny fikorianan'ny herinaratra any Guangdong, Shaanxi, Jiangsu, Shandong, Hubei, Sichuan ary Fujian dia amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka. Fiara manokana no ampiasain'ny fiara mpandeha; Miorina amin'ny taxi ny fikorianan'ny herinaratra ataon'i Shanxi, ampiana fiara mpandeha. Miharihary ny fanjifana herinaratra fiara manokana toy ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fanofana.
Ny faritany folo sy tanàna faratampony amin'ny resaka herinaratra dia manana fanjifana herinaratra any amin'ny faritany valo sy tanàna be mpandray anjara amin'ny bus sy taxi. Anisan'izany, ny faritanin'i Guangdong no nitarika tamin'ny 320,29 tapitrisa kWh.
Hatramin'ny volana Mey 2018, tamin'ny alàlan'ny mpikambana ao amin'ny fiarahan'ny mpanamboatra fiara (BYD, SAIC, BAIC, Jianghuai, Tesla, Changan, Geely, Chery, Dongfeng Electric, Dongfeng Nissan, Guangzhou Automobile, FAW, Zhidou) santionany niavosa ny antontam-baovao. 441,422, ary ny salan'ireo fantsom-pandefasana tsy nahomby dia 31,04%. Anisan'izany ny habetsaky ny antontan-taratasim-bola izay tsy afaka namboarina noho ny "mpampiasa vondrona manangana antontam-bolony manokana" dia 16,27%, izay tsy nifanaraka satria "tsy nifarimbona ny trano tao amin'ny faritra onenana". 4,75% ny tahan'ny antontam-bato mifehy. Ny tahan'ny fandefasana antontam-pilotra izay tsy afaka namboarina noho ny "tsy misy toeram-piantsonana raikitra ao amin'ny faritra onenana" dia 2.56%. Ny habetsaky ny pilotra famoahana entana izay tsy namboarina noho ny "famerana amin'ny alàlan'ny gara manokana" dia 2.60. %, noho ny zava-misy fa "tsy misy toeram-piantsonana raikitra eo amin'ny toeram-piasana", 0,7% ny tahan'ny famoahana pilotra izay tsy azo hatsangana. Ny tahan'ny fandefasana antontam-bato tsy afaka namboarina noho ny "fahasarotana amin'ny famerana herinaratra amin'ny toeram-ponenana" dia 0,17%.